သင် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိရဲ့လား | မာသင်
ချားဒါဝင် က ကမ္ဘာဦးကစလို့သက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာ အခုချိန်ထိ ရှင်သန် ကျန်ရစ် ကြသူများ ဆိုတာ အသန်မာဆုံးသောသတ္တဝါများ မဟုတ်သလို၊ အသိဉာဏ်အရှိဆုံးသောသတ္တဝါတွေလဲမဟုတ်။ အပြောင်းအလဲတွေမှာ အမြန်ဆုံးလိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်သောသတ္တဝါတွေသာ သက်ရှိရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်မို့လဲ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် အညီလိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်စု ဆိုတာ ဒိုင်နိုစောတွေထက်သေးငယ်ပေမယ့် အခုချိန်ထိရှင်သန်နေဆဲပါပဲ။
“အပြောင်းအလဲတွေမှာ လျင်မြန်စွာလိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသော” ဆိုတဲ့စကားလုံး က လူသားမျိုးနွယ်စု ကိုသက်ရှိရှင်သန်ခွင့်ကို ယနေ့အချိန်ထိပေးခဲ့သလို……
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ၊ အလုပ်အကိုင်တွေ၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ် တွေကိုလဲ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခွင့်ပေးစေမယ့် စကားလုံးဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ ။
ဖလင်နဲ့ရိုက်တဲ့ကင်မရာ ကနေ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ တွေ ပြောင်းလာပေမယ့် သင်က ခုထိ ဖလင် ရောင်းနေတုန်းလား။
ကက်ဆက်တိတ်ခွေ ကနေ စီဒီခွေ၊ ကလောက်နည်းပညာတွေ ပြောင်းလဲလာပေမယ့် သင်က ခုထိ ကက်ဆက်တိတ်ခွေ ဆိုင်ဖွင့်နေတုန်းလား။
ပိတ်စပေါ်ပန်းချီဆွဲ ကုန်ပစ္စည်းကြေငြာ တွေက ဗွီနိုင်းပေါ်ပရင့်ထုတ် ဖိုတိုရှော့အလှပုံတွေ အစားထိုးနေချိန်မှာ သင်က ခုထိ ဖိုတိုရှော့ဆိုတာဘာမှန်းမသိ ဖြစ်နေတုန်းလား။
သိန်းသုံးဆယ်ကျော်ကုန်ကျပြီး ဘယ်သူမှ မကြည့်တဲ့လမ်းဘေးဘေဘုတ်ကြော်ငြာကြီး တွေ ကနေ ဖေ့စဘုတ်မှာ ဆယ်ဒေါ်လာလောက်နဲ့လူသိန်းချီမြင်နိုင်တဲ့ကြေငြာတစ်ခုဖန်တီးလို့ရပေမယ့် သင်က အခုထိ ဘေဘုတ်ထောင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား။
ရေကြေးမီးကြေးအခန်းခ တွေ ဈေးများများနဲ့ဆိုင်ဖွင့်ဈေးရောင်းရာကနေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အွန်လိုင်းရှော့ တွေ၊ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ကပေ့တွေ မှာဆိုင်ခန်းခမရှိဈေးဆိုင်ဖွင့်နေကြပေမယ့် သင်က အခုထိ အခန်းခနဲ့နပန်လုံး၊ ပလိုင်းပေါက် နဲ့ဖားကောက်နေရတုန်းလား။
အကြံရှိပေမယ့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ထောင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုရင်…
လူတွေမှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှဘဝနဲ့ အပြင်က လက်တွေ့ဘဝ၊ မတူညီတဲ့ဘဝနှစ်ခုကို တပြိုင်နက်တည်းစီမံအချိန်ပေးနေရတော့မယ်ဆိုရင်..
မိတ်ဆွေ . မန္တာန်လေးတစ်ခုပေးပါရစေ။
“ငါသည် အပြောင်းအလဲတွေမှာ လျင်မြန်စွာ လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသောသူဖြစ်သည်။” လို့ဆိုကြည့်စမ်းပါ။
အများကြီးရွတ်စရာမလိုပါဘူး။ အခု တစ်ကြိမ်ပါပဲ။ နှစ်စက္ကန့်ပဲ ကြာမှာပါ။
ကဲ ..မျက်စိမှိတ် ..အသံထွက် ရွတ်ဆိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ။
” ငါသည် အပြောင်းအလဲတွေမှာ လျင်မြန်စွာ လိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသောသူဖြစ်သည်။”
Learn with Passion !
ချမ်းသာဖို့ဆုတောင်း တစ်နေ့ကြီးပွားချမ်းသာချင်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်က တောင်ကုန်းလေးတစ်ခု ပေါ်ကိုတက်သွားပြီး ဘုရားသခင်ဆီ ဆုတောင်းတယ်။လူငယ်။ ။ " သခင် …နှစ်ပေါင်း တစ်သန်း က ကိုယ်တော် အချိန်နဲ့ဆိုရင် ဘယ်လောက်နဲ့ညီမျှပါသလဲ"ကိုယ်တော် ။ ။ "တစ်မိနစ်"လူငယ်။ ။ " သခင် …...